Low-Voltage Motors akajairika maindasitiri motors uye mota Dzinodzora
Low-Voltage Motors akajairika maindasitiri motors muparadzi
Mafekitori Akananga Kutengesa KweGeneral Industrial Motor
Sarudza kubva kwakasiyana siyana maindasitiri ebasa motors. Tsvaga mota yako ye indasitiri yemotokari nyore
Uchishandisa yakakwirira-yemhando yemhangura waya uye simbi, zvingangoita zana nzira, kutsvaira kwakapora, rega uwedzere kushandisa rugare rwepfungwa; yakakwirira-yakanyatsorisa rotor, kusheedzera kushanda, kuderedza kurasikirwa, kwakawanda-kuchengetedza simba uye kunogara; yakakwirira-yakakoswa yesimbi yekupedzisira macaps kuti ave nechokwadi chepedyo fit, rotor Smooth uye inoshanda kushanda.
Iine makore anopfuura ruzivo mune indusrial mota kunyorera, Isu tinogadzira uye kugadzira maindasitiri mota uye servo inofamba zvigadzirwa zveMabhizimusi, Maindasitiri, uye Aerospace neDziviriro misika. Motors edu anosanganisira epurazi basa, chidimbu HP, kuputika chiratidzo, ac & dc mota. kutakura zvinhu uye vatengesi vanodikanwa; Zvigadzirwa zvekugadzira uye maitiro. Alos, isu tinopa servo mota kugadzirisa, maindasitiri mota gadziriso, nyowani & yakagadziridzwa mota kutengesa, mushure mekutengesa sevhisi uye technical technical rubatsiro.
Servo kufamba zvigadzirwa
Diki mota mota
Indasitiri DC Motor
Industrial mota kuputika chiratidzo
Indasitiri Mota yakakwira-chaiyo
Isu tinogadzira marudzi ese emota uye tinokwanisawo kumhanyisa motors zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Tine makore mazhinji eruzivo rwekugadzira, chigadzirwa chinoshandisa hollow design, izvo zvinoita kuti kupisa kupisa kuve kwakanyanya kudarika; uchishandisa yakakwirira-yakatsiga shaft, yakagadzirwa zvakanaka sarudza, chaiyo kugadzirwa.
Maindasitiri emagetsi magetsi, maindasitiri emagetsi emagetsi ari kutengeswa, 5 HP Mhepo Compressor Magetsi Mota, maindasitiri mota sevhisi inotsigira uye maindasitiri emagetsi emagetsi atinoshandira akakura kuma siemens, WEG, TECO Leeson, Baldor, ABB, Bison, Marathon, KB, Grove etc. Maindasitiri emagetsi magetsi ekugadzirisa masevhisi anosanganisira mota kudzoreredza, shredder, switchgear, uye magetsi emagetsi kugadzirisa. YeTotally Yakavharirwa Feni Yakatonhora (TEFC) Magetsi Mota - Yakashandiswa, Kutengesa, Tenga, Tengesa, Kutengesa, pasirese.
Isu tinogadzira ese marudzi emota, isu tinogona zvakare kugadzira mota maererano nemutengi zvinodiwa.Tinopa mhando yepamusoro, yakaderera mitengo zvigadzirwa. Isu tinotora mhando seyedu mukana uye wepasi mutengo kutendeseka.
Rubatsiro rwekushandisa pamhinduro dzemabhizimusi uye vavaki vemashini ndiko kugona kwedu. Makore mazhinji pahunyanzvi anosanganisira Electric Motors, Mechanical Gearboxes, Pump Motors, Industrial Electrical Kuisirwa & Kudzora, Maindasitiri kufefetedza, Basa remaawa makumi maviri nemaviri pakupindura mibvunzo yako yese.
Isu tiri mumwe wemhando yekutungamira inowanika pamusika anotengesa uye anoshanda yakakura maindasitiri motors yakakwana mutsara wekutengesa emhando dzakasiyana dzemagetsi motors kubva pakaderera voltage, kuputika bhiza kune simba rakakwira, yepakati zvese mhando dzemagetsi mota dzinogona kushandiswa kune akasiyana maindasitiri. application.
Makore ezvemotokari yekugadzira ruzivo ndeyekungokupa yakakwirira mhando uye yakasimba mota.Iwe unogona kuzorora uine chokwadi chekuti mhando dzemotor yedu
Kukurumidza & Kunoshanda
Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutibata nesu, isu tichafara kukubatsira iwe! Basa redu revatengi riri online zuva rese.Tine maitiro akanaka ekudzoka.
Isu tine vashoma nyanzvi dzepamusha vane yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira kugona, uye isu tiri vamwe vevashoma nyanzvi makambani.Saka ndokumbira uve nechokwadi
Imwe neimwe mota yemotokari ine mitengo yayo, tichave tichichinjika mutengo zvichienderana nezvinotengwa nemutengi, zvakawanda zvinobvisa uye nezvimwe.Tokumbira kuti ubate vatengi sevhisi.
Kana iwe uine zvigadzirwa zvako zvaunofarira, uya ubatane nesu!